Nhau - Zvitsitsinho zvakakwirira: kusunungurwa kwevakadzi kana kusungwa?
Gumbo High Bhutsu
gumbo & pfupi
Mesh & nemvere
Zvitsitsinho zvakakwirira: kusunungurwa kwevakadzi kana kusungwa?
Munguva dzazvino, zvitsitsinho zvakave chiratidzo chekunaka kwevakadzi. Vakadzi vane zvitsitsinho zvakakwirira vanodzoka nekudzoka mumigwagwa yeguta, vachigadzira nzvimbo yakanaka. Vakadzi vanoita kunge vanoda zvitsitsinho zvakakwirira nemasikirwo. Rwiyo "Zvitsitsinho Zvitsvuku" rinotsanangura vakadzi vachidzingirira zvitsitsinho zvakadai sekudzingirira rudo, vane shungu uye vasingadzoreke, kunge zvitsitsinho zvitsitsinho zvekuti haugone kuzviisa pasi. ”
Kutanga kweiyo nhepfenyuro yeTV "Ini NdingasaKuda Iwe" makore mashoma apfuura akatsanangurawo ichi "chiroto chepamusoro-chitsitsinho": shangu-refu-chitsitsinho dzinoratidza shanduko kubva kumusikana kuenda kumukadzi, uye zviroto zvemusikana wese. Muchiitiko cheTV, vatinoshanda navo mudhipatimendi rekugadzira vari kuunza kurudziro yekugadzirwa kweshangu nyowani dzevasikana dzakateerana- ”Makumi nemanomwe inguva yevasikana yekuva vasikana, zera rakanyanya kurota, rine mavara uye rakaperera zera. Kurota kwevasikana vane makore gumi nemanomwe vane makore ekuti Chii? Iyo ballerina, tulle, yakapfava, uye ine rudo, zvakanyatsoenderana nemhepo yemuchirimo ”, saka shangu nyowani dzakapihwa nevamwe vangu ndidzo mhando dzese dzeshangu dzakagadzirwa nenzira yemabhutsu ekutamba, kuteedzera bhutsu dze ballet. Asi mukadzi ane makore makumi maviri nemapfumbamwe anotungamira Cheng Youqing akapindura achiti: “Chiroto chemusikana ane makore gumi nemanomwe ndicho chechipiri chitsitsinho muhupenyu hwake, kwete shangu dze ballet. Musikana wese anoda kukura nekukasira uye anokurumidza kuita shangu mbiri dzakakwirira. ”
Zvitsitsinho zvakakwirira, zvakanaka, zvine fashoni, zvine hukasha uye zvine hukasha, hazvigone kurebesa zvinoonekwa zvinoonekwa nemakumbo evakadzi, asi zvakare zvinoita kuti tsoka dzevakadzi dzive dete uye dzakabatana. Vanogona zvakare kufambisa pakati pekudzora kwevakadzi kumberi, vachiziva vachisimudza misoro yavo uye zvipfuva uye dumbu. Muhudyu munogadzira rakakombama S-rakaumbwa. Panguva imwecheteyo, shangu dzakakwirira-chitsitsinho dzinotakurawo hope dzevakadzi. Kupfeka shangu dzakakwirira-chitsitsinho kunoratidzika kunge kune imwe yezvombo zvakapinza. Ruzha rwekucherechedza nekutarisa rwakafanana nerunosheedzera rwekufambira mberi, kubatsira vakadzi kubhadharisa munzvimbo yebasa uye nehupenyu, pasina zvinokuvadza. Miranda, mupepeti-in-mukuru wemagazini yepamusoro yemafashoni mu "The Queen Wearing Prada", ari pazvitsitsinho. Kwete, zvinofanirwa kutaurwa kuti akafanana nezvidhinha zvakatsiga mune poster ye "Mambokadzi Kupfeka Prada", yakapinza uye yakapinza, munhandare yehondo yemafashoni. Kuenderera mberi neushingi uye kusingakundike, chave icho chinangwa icho vakadzi vazhinji vanoshuvira nekutevera.
Post nguva: Mar-01-2021